Digniin Bulshada Puntland U Gudbinayso Madaxweyne Gaas | SAHAN ONLINE
Digniin Bulshada Puntland U Gudbinayso Madaxweyne Gaas
Fariintani waxay la mid tahay midii uu C/weli Gaas u jeediyey Maamulkii Dalka ka jiray 2013, markii uu ololaha Doorashada ku jiray.
Madaxweyne Gaas awood sharci ma u leeyahay inuu Dastuurka Dalka ee la ansixiyey sannadkii 2013 fara gelin wax ka bedel ah ku sameeyo ?Yaa qaadaya masuuliyad darrada ka timaada fara gelinta Dastuurka Dalka u degsan ? Furida ama dib u eegista Dastuurka dhibaatada ka timaada yaa lagula xisaabtamayaa ?
Madaxweyne C/weli Gaas oo mudadii xil-haytiisa ay ka hartay 2 Bilood keliya inuu mushkilad adag oo khatar ah oo burburin iyo furfuran ku keeni karta Gobollada Dalka ka abuuro Shacabku ma ka oggolaanayaa ?
Ma wuxuu fursad sharci u siinayaa Kooxda Villa Somalia Ugandhesku ku ilaaliyo inay fursad u helaan inay maamulka Puntland gacan ku yeeshaan ??
C/weli ma og yahay in labaatan beelood ka badan oo reer Puntland ah aanay Barlamaanka xubin xildhibaan ku lahayn ?
C/weli Gaas waxaa bulshadu kula talinaysaa, Fidno Huruda Ha u durbaan tumin oo damacaagu yuu dalka burburin, Maahmaah ayaa oranaysa (Qofkii Dabayl abuura, Duufaan buu gurtaa).
Xildhibaanada xilligoodu dhamaaday oo Kalfadhigii ugu dambeeya qabanaya 25 October 2018, waxaa bulshadu leedahay ninkii tegayow ceeb ha ka tegin.
Maahmaah kale ayaa waxay tiraahdaa ninna caadadii ma daayo, bahalna cayriin ma daayo taaso loola jeedno xubnaha Golaha Wakiilada habkii ay u maareeyeen Ansixinta Xaraashka Dekedda Bosaso 2017, inay ka waantoobaan, inaanay dastuurka tii oo kale ku samayn.
Xigasho: Wargayska Kaahabari